အခါထိတ်လန့်ဖြစ်ပျက်သမျှ အဆိုပါဒစ္စကိုမှာ PETE လှု - နှုန်းထားများ
အခါထိတ်လန့်ဖြစ်ပျက်သမျှ အဆိုပါဒစ္စကိုမှာ Pete လှု
ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သော! တစ် ဦး Bachelor ခရီးစဉ်၏ဒစ္စကိုရဲ့မရဏမှာချိုးမတိုင်မီအင်္ဂါနေ့အင်္ဂါနေ့ Pete မှာရပ်တန့်စေခြင်းနှင့် superfans တစ်ခုနီးပါးရောင်းထွက်လူအစုအဝေးအဘို့ကစားခဲ့သည်။ Pitt သည်အမေရိကသို့ ၂ လတာခရီးစဉ်၌သူတို့၏တတိယမြောက်ပြပွဲဖြစ်သည်။
စိန့်မိုတယ်နှင့် Misterwives နှစ်ခုတွင်အဖွင့်ပွဲနှစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာပြပွဲတစ်ခုကိုတက်ပြီးလူအုပ်ကိုအားပေးခဲ့တယ်။ သူတို့ဟာ headliner ရဲ့ drumset နှင့် pyro တူးစင်ပုန်းအောင်း, စင်မြင့်၏ရှေ့မှောက်၌တစ် ဦး ကုလားကာနှင့်အလင်းအိမ်များ၏ရှေ့မှောက်၌ကစားခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတော့ထိတ်လန့်! စင်မြင့်ကိုယူ။ တီးဝိုင်းတွင် Brenden Urie (အသံများ၊ ရံဖန်ရံခါစန္ဒရားနှင့်တီးသံများ) နှင့်သူ၏ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသောတီးဝိုင်းတို့ပါဝင်သည်။ သူတို့သီဆိုခဲ့သောပထမဆုံးသီချင်းမှာကောင်းသောအချိန်နှင့်ငါ့ကိုမခြိမ်းခြောက်ပါနှင့်။
သူတို့ရဲ့ setlist အများအပြားပန်ကာအကြိုက်ဆုံးနှင့်၎င်းတို့၏အစောပိုင်းအလုပ်အချို့ပါဝင်သည်။ The Nine in Nine တွင်သူတို့သရုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်တီးဝိုင်းကစင်မြင့်ပေါ်ကနေထွက်သွားပြီး Brenden Urie က 'This is Gospel' သီချင်းကိုဖွင့်ပြထားတဲ့ Pete ရဲ့အခြားတစ်ဖက်စန္ဒယားမှာထိုင်နေစဉ်တီးဝိုင်းကစင်မြင့်ပေါ်ကနေထွက်ခွာခဲ့ပြီးဗီဒီယိုတိုလေးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ။ သူသည်လူစုလူဝေးများမှတဆင့်စင်မြင့်သို့လမ်းလျှောက်နေစဉ်သူတို့၏နောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သော Death of Bachelor ၏ခေါင်းစဉ်ကိုသီဆိုခဲ့သည်။
သူတို့ဟာထို့နောက် Billy Joel အဖုံး၊ Movin 'Out (Anthony's Song) နဲ့ Bohemian Rhapsody တို့ကိုလုပ်ခဲ့ပြီးလိင်တူချစ်သူတစ် ဦး ရဲ့ပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတစ်ပုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Urie ကပရိသတ်တွေရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ Urie သည် Rhianna လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်စည်တိုတိုတစ်ခုသာရှိသည်။ သူတို့ကဖျော်ဖြေပွဲကိုအောင်ပွဲခံပြီး Confetti အမြောက်များဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ငါသူတို့သီချင်းသုံးခုသို့မဟုတ်လေးခုကြိုက်နှစ်သက်ပြပွဲသို့သွား။ အများကြီးပိုကြိုက်ခဲ့သည်။ ငါမုန်းကြောင်းကစားတစ်ခုတည်းသီချင်းမျှမရှိ။ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သော! The Disco သည်စွမ်းအင်နှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုများစွာဖြင့်ကစားခဲ့ပြီးသင်စင်မြင့်ပေါ်ရှိလူတိုင်းကိုသူတို့လုပ်သမျှကိုနှစ်သက်ကြောင်းပြောပြနိုင်သည်။ လူတိုင်းကအရမ်းစိတ်ကျေနပ်မှုပြပွဲထားခဲ့တယ်။
ငါအရမ်းထိတ်လန့်ကိုမြင်လျှင်အကြံပြု! သင်တီးဝိုင်း၏ကြီးမားသောပန်ကာမဟုတ်လျှင်ပင်အသက်ရှင်ပါ။ အခွင့်အလမ်းကသင်ပြသသည့်အချိန်တွင်သင်သည်တ ဦး တည်းဖြစ်လာလိမ့်မည်။